Pre-shave okhilimu namafutha | Amadoda aSitayela
Yize kungadingekile, ukhilimu noma uwoyela omuhle wangaphambi kokushefa kunconywa kakhulu njengengxenye yesimiso sakho sokushefa nsuku zonke. Ukhilimu (noma uwoyela) ulungiselela isikhumba ukushefa, futhi unikeza umuzwa omuhle kakhulu ebusweni. Uma ungenasikhathi, noma ungazizwa uthanda ukubeka ithawula elishisayo ebusweni bakho, ngincoma ukuthi uzame eminye yemikhiqizo eminingi engakashejwa emakethe.
Noma ngabe ukhilimu noma uwoyela wangaphambi kokushefa, indlela yokusetshenziswa iyefana:
1.- Manzisa ubuso bakho ngamanzi ashisayo. Akuwona nje umbuzo wokugeza ubuso bakho, kodwa wokuzinikeza ukusikhipha kancane ngamanzi ashisayo ukuvula izimbotshana zakho.
2.- Sula ubuso bakho ngethawula, kodwa ungazomisi ngokuphelele. Vumela isikhumba sihlale simanzi.
3.- Gcoba ukhilimu noma uwoyela owandulelayo bese ubhucunga indawo okufanele igundwe.
4.- Ngaphandle kokususa ukhilimu noma uwoyela, gcoba igwebu noma insipho ngezandla zakho noma ngebhulashi. Uma ufake uwoyela, kuyalulekwa ukuthi ungasebenzisi ibhulashi, ngoba lingasusa uwoyela uma ulisebenzisa.
Ngisebenzisa ukhilimu wangaphambi kokushefa wePraso. I-Proraso cream iqukethe i-menthol ne-eucalyptus, enikeza umuzwa oqabula kakhulu. Ngiyayincoma, ikakhulukazi ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Kugundiwe » Pre-shahe okhilimu namafutha
Bayithengisa kuphi, amakhemisi, intengo?